तपाईको मोबाइलमा नचिनेको विदेशी नम्बरबाट ‘मिस कल’ आइरहेको छ ? सावधान ! | Birat Khabar
तपाईको मोबाइलमा नचिनेको विदेशी नम्बरबाट ‘मिस कल’ आइरहेको छ ? सावधान !
बिराटनगर । तपाईको मोबाइलमा नचिनेको विदेशी नम्बरबाट ‘मिस कल’ आइरहेको छ ? छ भने महत्वपूर्ण कल होला भनेर ती नम्बरमा कल फिर्ता नगर्नूस्, तपाईको ब्यालेन्स गुम्न सक्छ ।
विदेशी ठगहरुले पैसा कमाउन त्यसरी मिस्ड कल गरेका हुन् । ती विदेशी नम्बरमा कल फिर्ता गर्दा मोबाइलको धेरै ब्यालेन्स काटिन सक्छ। काटिएको रकमबाट मिस्ड कल गर्ने व्यक्तिले फाइदा उठाइरहेका हुन्छन् । विभिन्न देशका नम्बरबा ६ नेपालमा त्यसरी कल आउने गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। ‘२–३ सेकेन्डमात्र कल गर्द पनि १–२ सय रुपैयासम्म व्यालेन्स काटिन सक्छ,’ अर्यालले भने, ‘यस्ता कल ठग्ने उद्देश्यले आइरहेका छन् ।’
नचिनेका त्यस्ता नम्बरमा ‘कल ब्याक’ नगर्न प्राधिकरणले सचेत गराएको छ । प्राधिकरणले पोल्याण्ड, मलेसिया, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण सुडान, साउदी अरेयिबा लगायत देशबाट आएका त्यस्ता कललाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको खबर अाजकाे नागरिक दैनिकमा छ ।